Damaanada shaqo ee dhalinyarada
Damaanada shaqo dhalinyarada waa barnaamij loogu talogalay adigaaga ka yar 25 sano. Waxaad tusaale ahaan heli kartaa taageero in la raadiyo shaqo, tababar goob shaqo ama talo-bixinta waxbarashada iyo xirfada. Hadafku waa inaad hesho shaqo ama bilowdo waxbarasho sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah.
Waa maxay damaanada shaqo ee dhalinyarada?
Waa barnaamij ka kooban hawlo loo habeeyay shakhsiga iyo taageero, laguna daray inaad adigu si fir-fircoon u raadiso shaqo. Hadafku waa inaad hesho shaqo ama bilowdo waxbarasho sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah.
Waxaad ka qayb-qaadan kartaa damaanada shaqo ee dhalinyarada haddii aad tahay 16-24 sano oo aad bilaa shaqo tahay kana diiwaan-gashantahay dhankayaga. Waxaad xitaa lagaaga baahanyahay inaad buuxiso mid ka mid ah arrimahan:
Adigu aad bilaa shaqo ahayd wakhti buuxa wakhti ah ugu yaraan 90 maalmood afartii bilood ee ugu dambeeyay.
Adigu aad wakhti ugu yaraan saddex bilood soo shaqaysay wax ka yar intii aad awoodi lahayd, tusaale ahaan haysatay shaqo saacadle ah, oo aad xaq u leedahay magdhawga laga helo qasnada shaqo la'aanta.
Adigiu aad ka soo qayb-qaadatay qorshaha dagnaanshaha xilli wakhtiga ugu badan ah, laakiin weli aad tahay bilaa shaqo.
Adigu lagugu xukumay xarig oo laguu ogolaaday joogista banaanka xabsiga ama si shuruud ah laguu sii daayay laakiin aanad dhamaysan hal sano oo ka mid ah wakhtiga tijaabada.
Waad ka mid ahaan kartaa damaanada shaqada ee dhalinayarada wakhti kala bar ah
Waad ka mid ahaan kartaa damaanada shaqada ee dhalinayarada wakhti kala bar ah haddii adigu:
aad bilaa shaqo tahay kala bar ahaan oo haysato qasnada shaqo la'aanta
aad fasax waalidnimo ku jirto wakhti kala bar ah
aad buuxisay 20 sano oo wax ka baratid waxbarashada dadka waaweyn wakhti kala bar ah
aad heshiis waxbarasho la leedahay anaga ama degmadaada
wax ka baratid iswiidhishka loogu talogalay ajnabiga wakhti kala bar ah
talo-bixinta waxbarashada iyo xirfada
hawlaha raadinta shaqo oo leh tababare
waxbarasho ah ilaa ugu badnaan lix bilood
ku tababarashada shaqo oo ka dhacda goob shaqo
Adigu xaq uma lihid fasax marka aad ka qayb-qaadanayso damaanada shaqo ee dhalinyarada, laakiin waxaanu xaaladaha gaarka ah ku siin karnaa fasax ah ugu badnaan saddex maalmood.
Marka aad ka qayb-qaadanayso damaanada shaqo ee dhalinyarada waxaad magdhabka ka heli kartaa Qasnada Caymiska. Marka aanu kaa diiwaan-gelino barnaamijkan waxaad magdhabka ka codsanaysaa Qasnada Caymiska. Si loo helo magdhabka waa muhiim inaad raacdo qorshaha aad nala samaysay anaga. Tani waxay tahay in lagaaga baahanyahay inaad ka qayb-qaadato hawlaha aynu ku heshiinay.
Magdhabida marka aad ka qayb-qaadanayso barnaamij
Haddii aad xanuusanayso wakhti dheer waxaanu isku daynaa inaanu nuxurka barnaamijkan kugu haboonaysiino si aad u awoodo inaad uga qayb-qaadato. Haddii aad xanuusato ama u baahantahay inaad guriga joogto si aad u daryeesho ilmo xanuusanaya waxaa lagaaga baahanyahay noo soo sheegto.
Haddii aad hesho shaqo ah wakhti kala bar ah markaasi waa lagaa saarayaa barnaamijkan. Haddii aad hesho shaqo wakhti kala bar ah oo aad shaqayso wax badan oo gaarta inaad buuxiso shuruud cusub dhanka qasnada shaqo la'aanta, markaasi waa lagaa saarayaa barnaamijkan. Haddii aad noqoto bilaa shaqo mar kale, iyadoo aanad buuxin shuruud cusub dhanka qasnada shaqo la'aanta, markaasi dib ayaa laguugu qori karaa barnaamijkan.
Maxaa dhacaya haddii si kastaba ha ahaatee aanan helin shaqo ama waxbarasho
Haddii aanad helin shaqo ama bilaabin waxbarasho gudaha 15 bilood waxaad taas badelkeeda heli kartaa taageero sii socota dhanka damaanada shaqada iyo horumarka.
Damaanada shaqada iyo horumarka
Wakhti intee leeg ayaan ka mid ahaan karaa damaanada shaqo ee dhalinyarada
Waxaad ka mid ahaan kartaa damaanada shaqo ee dhalinayrada ilaa iyo inta aad
bilaabayso shaqo ama waxbarasho wakhti kala bar ah, kana baxsan damaanada shaqo ee dhalinyarada
Waxaad ka mid ahaan kartaa barnaamijkan ugu badnaan 15 biolood.
Waa lagaa saarayaa barnaamijkan
Waxaad ku jirtaa caymisyada dhaawaca qofka iyo nolosha marka aad ka qayb-qaadanayso damaanada shaqo ee dhalinyarada. Xitaa shaqo-bixiyuhu wuxuu magdhabid ka heli karaa dawlada haddii wax yaala shirkada aad dhaawacdo.
Miyaan waayi karaa booskayga barnaamijkan
Waad ku soo noqon kartaa barnaamijkan haddii aad ku maqnayd xanuun, fasax waalidnimo ama wax baranaysay. Laakiin maaha inaad maqnayd wax ka badan laba iyo toban bilood. Haddii aad soo shaqaysay oo noqotay bilaa shaqo waad ku soo noqon kartaa barnaamijkan haddii aanad dib xaq u lahayn qasnada shaqo la'aanta.